Mogadishu Journal » 179 Maxbuus oo laga sii daayey Xabsiga Muqdisho iyo sababta ka dambeysa
Dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii daysay tiro Maxaabiis, kuwaasoo uu cafis u fidiyay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa xabsiga Dhaxe ee Xamar iyo Xabsiyo kale ka sii daayay maanta 179 maxbuus kuwaasoo Madaxweynaha uu u fidiyay Cafis Munaasabadda Ciidul fitriga Awgeed.
Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in Maxaabiista maanta laga sii daayay xabsiyada ay ku xukunaayeen dambiyo yar yar.
Waxaa uu tilmaamay in Maxaabiista intii ay xabsiga ku jireen la baray Waxyaabo ay kamid yihiin Farsamada gacanta, dhismaha, toliinka dharka, sameynta agabka guryaha iyo xafiisyada iyo qaar kale si ay ugu shaqeystaan marka ay dhex galaan bulshada.
(Sawirro) Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Kampala